सूचना प्रबिधि Archives - SangaloKhabar
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने गरी पुरानो प्रस्ताव रद्द गरिएको जनाएको हो । स्याटेलाइट राख्न माग गरिएका कम्पनीहरुमध्ये छनोटमा परेका कुनै पनि कम्पनीले ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि खारेज भएको प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सबै प्रस्...
काठमाडौं । नेपालमा साढे दुई करोड जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को आठ महिना (गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा दुई करोड ६३ लाख ५६ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको हो । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार गत माघको तुलनामा फागुनमा नौ लाख ३६ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता थपिए...
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनलाई लक्षित गरी नेपाल टेलिकमले रिचार्जमा सत प्रतिशत बोनस दिने योजना ल्याएको छ । टेलिकमले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै बिहीबारदेखि बोनस योजना लागू हुने जनाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उपभोक्ताहरु घरमा बसेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंगलबार टेलिकम कम्पनीलाई यस्तो अफर ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहि निर्देशनलाई पालना गर्दै टेलिकमले उपभोक्ताला...
इटहरी । इटहरीमा तीन दिने नि:शुल्क राेबाेटिक तालिम सुरू भएकाे छ । क्यान सुनसरीकाे आयोजना तथा टिम फ्यूजन इटहरीकाे सहकार्यमा इटहरी स्थित काेशी सेन्ट जेम्स कलेजमा कार्यक्रम सुरू भएकाे हाे । तालिममा १५ बिद्यालय तथा कलेजका ५० जना सहभागि छन् । कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्दै क्यान प्रदेश १ का अध्यक्ष भबकृष्ण तिम्सिनाले अब राेबटिक युग भएकाे र यसकाे राम्राे सम्भाबना रहेकाे बताए । उद्घाटन कायर्यक्रममा बाेल्दै...
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले २० रुपैयाँमा ७० मिनेट कुराकानी गर्ने अफर ल्याएको छ। आफन्त र साथीभाइहरुको साथमा रमाउनका लागि भन्दै टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि नयाँ अफर ल्याएको हो। यस अघि टेलिकमले २ दर्जनभन्दा बढी अफर ल्याइसकेको छ। अनलिमिटेड वान आवर प्याक दिइएको यस अफरमा २० रुपैयाँले ७० मिनेट कुराकानी गर्न सकिने, इन्टरनेट चलाउन वा अनलिमिटेड म्यासेज पठाउन पनि सकिने टेलिकमले जनाएको छ। यो सेवा प्रयो...
काठमाण्डौं । नेपालको राष्ट्रिय झन्डा अंकित नानो स्याटेलाइट पृथ्वीको कक्षमा घुम्न सुरु गरेको छ । यसअघि वैशाख ५ गते अन्तराष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुर्याइएको उक्त स्याटेलाइट सोमबार दिउँसो ४ बजेर १९ मिनेटमा रिलिज हुँदै पृथ्वीमा परिक्रमा गरेको हो । जापानस्थित क्युटेको विश्वविद्यालयले नेपालका लागि उक्त भू–उपग्रह गत वैशाख ४ गते प्रक्षेपण गरेको थियो । डेढ महीनाअघिबाट अन्तरराष्ट्रिय अन्तरीक्ष कक्ष...
काठमाडौं, १२ बैशाख। बुधबार बिहानको भुइँचालोलगत्तै राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रमा तारन्तार फोनको घन्टी बज्न थाल्यो। आधा घन्टामै झन्डै ५० देखि ६० कल। केन्द्रमै रहेका भूकम्पविद् चिन्तन तिम्सिनालाई फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ भयो। अधिकांशको एउटै जिज्ञासा थियो- कति रेक्टर स्केल? कहाँ केन्द्रविन्दु? चिनेजानेका र आफन्तले मोबाइलमै फोन गरेर पनि चिन्तनलाई हैरान पारे। यसरी भुइँचालो आउनासाथ फोन गर...
काठमाडौँ, १० बैशाख। वैज्ञानिकहरूले ‘केप्लर–४७ डी’ नाम दिइएको नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका छन् । यो पृथ्वीभन्दा करिब ३ हजार प्रकाश वर्ष टाढा छ । यो ग्रहले दुइटा सूर्यको वरिपरिसमेत घुम्ने गरेको छ । नयाँ ग्रहको खोजी नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेसन (नासा), सान डीएगो युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ टेक्सास, अर्लिङटन, युनिभर्सिटी अफ हवाईलगायतका वैज्ञानिकहरूले गरेका हुन् । यो खोजीबारेको अध्ययनपत्र ग...
अन्तरीक्षमा यसरी गरियो नेपालको पहिलो भू–उपग्रह प्रक्षेपण (भिडियोसहित)
काठमाण्डौं, ५ बैशाख । अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (नानो स्याटेलाइट) अन्तरीक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा पतिष्ठान (नास्ट) र जापानको क्युसु इस्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक)को सहकार्यमा जापानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीद्वारा निर्मित ‘नेपाली स्याट् १’ नेपाली समय अनुसार बिहिबार बिहान २ः३१ मा प्रक्षेपण गरिएको हो । अमेरिकी अन्तरीक्ष कम्पनी अर्बिटल...
टेलिकमको नयाँ वर्ष अफर : दुई सय रुपैयाँमा ३ जीबी डाटा, दुई सय मिनेट कल
काठमाडौं, २९ चैत। नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि ‘नयाँ वर्ष अफर २०७६’ सार्वजनिक गरेको हो । यो अफरमा टेलिकमका ग्राहकलाई २ सय रुपैयाँमा प्याक उपलब्ध गराइनेछ । सो प्याकमार्फत ३ जीबी डाटा चलाउन तथा कम्पनीकै नेटवर्क भित्र २ सय मिनेट भ्वाइस कल गर्न र २ सय वटा एसएमएस पठाउन सकिने छ । उक्त प्याकको अवधि खरिद गरेपश्चात् ५ दिनसम्म रहने छ ।...